Shirka ECOWAS ee Ouagadougou: G5 Sahel wali ma leedahay mustaqbal? - YoungAfrica.com - KU SOO DHAWEYN
ACCUEIL » SIYAASADDA Shirka ECOWAS ee Ouagadougou: G5 Sahel wali ma leedahay mustaqbal? - YoungAfrica.com
Shirka ECOWAS ee Ouagadougou: G5 Sahel wali ma leedahay mustaqbal? - YoungAfrica.com
Xarunta dhexe ee ciidamada isku dhafka ah G5 Sahel oo xaruntiisu tahay Sévaré, Oktoobar 2017. Lick Flickr / MINUSMA / Harandane Dicko
Shir madaxeed aan caadi ahayn oo ECOWAS loogu gogol xaarayo la-dagaallanka argagixisannimada ee ka hooseeya gobolka ayaa lagu qabtaa Sabtidan 14 September oo ku taal caasimadda Burkina Faso. Bartamaha wadahadallada: hagaajinta isuduwidda amniga ee ka dhexeeya waddamada xubnaha ka ah iyo mustaqbalka G5 Sahel, wax ku oolnimada oo ah mid aad iyo aad u badan oo ah arrin.
Dhamaan astaamaha. In kasta oo Burkina Faso ay diiwaan geliso usbuuc ka dib dhimashada cusub (oo ay ku jiraan 29 maalinta kaliya ee 8 Sebtember Laba weerar oo ka dhacay waqooyiga dalka), madax ka tirsan Ururka Dhaqaalaha Dhaqaalaha ee Waddamada Galbeedka Afrika (ECOWAS) ayaa ku kulmaya sabtigaan magaalada Ouagadougou si ay isugu dayaan inay xoojiyaan iskaashigooda marka laga hadlayo fiditaanka. Khataraha jihaadiyiinta ee ka socda Sahel ilaa Koonfurta iyo waddamada xeebaha.
Waxaa lagu go'aamiyay bisha Juun ee Abuja, shirkan aan caadiga ahayn ayaa ujeeddadiisu tahay in lagu muujiyo isuduwidda amniga ka wanaagsan ee ka dhexeeya waddamada xubnaha ka ah G5 Sahel (oo ay ku jiraan Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger iyo Chad), xitaa si ay u dhammaystirto nadiifkeeda iyo fudaydkeeda. . Madaxweynayaasha Mauritiania Mohamed Ould Ghazouani iyo Chadian Idriss Deby Itno, oo aan dalalkoodu ka mid ahayn ECOWAS, ayaa sidoo kale lagu filayaa Ouagadougou. Kahor shir madaxeedka waddamada xubnaha ka ah, ee loo qorsheeyay Sabtida, wasiirradooda arrimaha dibedda, gaashaandhigga iyo amniga waa inay ka qeybgalaan shirarka diyaarinta.
[Khariidad] Madaxweynaha Tuniisiya: Miyay asalka juquraafi ahaan musharixiintu saamayn ku yeelan doonaan codaynta? - YoungAfrica.com
Morocco: baaritaan ku saabsan Fouzi Lekjaa aan fiicnayn - JeuneAfrique.com
Farsamada sare: Andela waxay bedeshaa istiraatiijiyadeed waxayna ka goysaa shaqaalaheeda Afrika - JeuneAfrique.com
DADKA & LIFESTYLE4,617